Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ah | Somalisan.com
Home Afsomali Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ah
– Waxaannu hirgelinay Siyaasadda ah ‘Arday Kastaa ha helo Buugaagta Manhajka waxbarashada.’ Waxaana la qaybiyey1,200,000 oo buug oo la gaadhsiiyey ardayda gobollada oo tiradoodu dhantahay 154,000 arday.
– Waxa deeq-waxbarasho dibadeed loo diray arday gaadhaysa382 arday oo ka kala yimi dhammaan Gobollada dalka.
· Waxa la kordhiyey ceelashii biyo-soo-saarka Geedeeble21%.
Dhaqaaluhu waa saldhiga horumarka ee dal kasta oo dunida ku yaal.Dhaqaale la’aan horumar lama gaadho. Haddaba, iyadoo taas laga duulayo, waxay xukuumaddu u tafaxaydatay sidii dhaqaaalaha dalka loo kobcin lahaa innagoo isku tashanayna. Waxay xukuumaddu xoog saartay wax-soo-saarka Beeraha, Xoolaha, Kalluumaysiga iyo Khayraadka dhulka hoostiisa ku duuggan.
– Xukuumaddu waxay raashin iyo biyo gaadhsiisay in ka badan245,000 qoys, una dhiganta 1,200,000 oo qof oo abaaruhusaameeyeen.
– Waxaan ku boorinaynaa, si aynu u hakino xawliga xaalufka iyo nabaad guurku ku socdo, in gobol kastaa ugu yaraan beero30,000 geed.
Waxaannu qorshaynaynaa in Somaliland iyo Qaramada Midoobay yeeshaan nidaam iyo Qorshe u gaar ah Somaliland, oo ay Somaliland ku hesho saamiga saxda ah ee Deeqaha ay bixiso Qaramada Midoobay(Somaliland UN Special Arrangement), sida Bulshada Caalamkuba hore ugu sameysay Somaliland qorshaha gaar ah ee (Somaliland Special Arrangement). Qaramada Midoobayna waxaan ugu baaqayaa in ay ilaaliyaan xaq-soorka iyo caddaaladda saamiga gar-gaarka ay bixiyaan.
Previous articleKulan ay ka qeybgaleen Safiirrada Maraykanka, Ingiriiska, Midawga Afrika iyo safiir ku-xigeenka Midawga Yurub ee Soomaaliya iyo Taliyaha Hawlgalka AMISOM ayaa Muqdisho lagu qabtay
Next articleMADAXWEYNE FARMAAJO OO FURAY KALFADHIGA SHANAAD EE GOLAHA SHACABKA ( DAAWO SAWIRADA )
Ruux risaas ku dhacday ugu geeriyooday goobta ay ka socoto doorashada Cadaado
Somalisan News - November 16, 2016
Ururka Jaamaca carata oo qorsheynaya In Muqdisho lagu qabto shir weyne looga hadlayo dib...